Ahoana ny fomba ahazoana PR | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 30, 2013 Talata, Oktobra 29, 2013 Douglas Karr
Raha vao manomboka ny fifandraisana amin'ny daholobe ianao dia aza hadino ny mijery ny zava-drehetra Torolàlana ho an'ny PR nataon'i Brownstein & Egusa. Ary raha mila tsipiriany misimisy kokoa momba ny paikadin'ny PR, aza hadino ny mamaky ny lahatsoratry ny vahiny - Torohevitra PR avy amin'ny mpanoratra VentureBeat teo aloha - avy amin'i Conrad Egusa ao amin'ny bilaogy mahafinaritra an'i Scott Monty. Misaotra manokana an'i Marty Thompson ho an'ny mahita!
Raha hanampy zavatra hafa aho, dia dingana iray eo anelanelan'ny 3 sy 4 izany raha ny tena marina farito ny haavonao. Manana solontena PR maromaro aho izay miaraka amina anarana voalohany… ary ny iray dia mpanoratra ao amin'ny bilaoginay nahazoana alàlana hizara izay vaovao tiany. Ny antony dia satria manaja tanteraka ny iraky ny bilaoginay ny mpanoratra ary tsy manararaotra izany velively. Ilaina ny fananana feon-kira mahafinaritra sy manokana!
Tags: torolàlana ho an'ny vao manombokabrownstein egusatorolàlana ho an'ny prprgazety an-gazetyfifandraisana amin'ny vahoaka
TapSense: Torolàlana feno ho an'ny Marketing amin'ny finday ho an'ny 2014
Oct 31, 2013 amin'ny 12: 57 AM
Salama Douglas, te-hiteny betsaka aho, misaotra betsaka tamin'ny fizarana ny loharano PR noforoniko. Azafady mba ampahafantaro ahy foana raha mila zavatra ianao.
Ho an'ireo mpamaky ny MarketingTechBlog, faly aho mamaly izay fanontaniana rehetra momba ilay lahatsoratra ao amin'ny faritra maneho hevitra eto.